Motor avo lenta avo lenta 16DCT Athlonix ™ Mini
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-02-27
Portescap dia mampahafantatra ny motera 16DCT vaovao amin'ny motera Athlonix avo lenta avo lenta DCT. Ny motera 16DCT dia afaka manome torolàlana mitohy hatramin'ny 5.24 mNm amin'ny halavany 26mm fotsiny. Ny 16DCT dia mampiasa andriamby Neodymium mahery sy famolavolana angovo tsy voatanisa ao Portescap. Ny optimiz ...
Ahoana no fiasan'ny mpanadio banga?
Ilay mpanadio banga manetry tena dia iray amin'ireo fitaovana fanadiovana trano mora ampiasaina indrindra ankehitriny. Ny endriny tsotra nefa mahomby dia nesorina tamin'ny tsy maintsy fanadiovana vovoka sy vongan-tany hafa amin'ny alàlan'ny tanana, ary nahatonga ny fanadiovana trano ho asa mahomby sy haingana kokoa. Tsy mampiasa na inona na inona bu ...
Mitsubishi Motors dia mampatsiahy ireo fiara Outlander EX any Shina
Mitsubishi Motors dia hampatsiahy ireo fiara 54 672 any Sina miaraka amin'ny solo-drivotra misy olana. Ny fampahatsiahivana, izay manomboka amin'ny 27 Jolay, dia ho an'ny fiara Outlander EX izay nohafarana novokarina teo anelanelan'ny 23 Nov 2006 sy ny 27 septambra 2012, hoy ny General Administration of Quality Supervision, Inspection and ...
Maneho ny motera bitika kely indrindra sy matanjaka indrindra eto an-tany
Ny motera ultrasound Piezoelectric dia manana tombony roa lehibe, dia ny hakitroky ny angovo avo sy ny rafitr'izy ireo tsotra, izay samy mandray anjara amin'ny miniaturisation-ny. Nanangana motera ultrasound prototype micro prototype izahay amin'ny alàlan'ny stator iray milimetatra toratelo eo ho eo. Ny teo aloha ...
Tatitra momba ny indostria mikrômôora manerantany sy Sina, 2016-2020
Ny vokatra micromotor manerantany dia niorina tamin'ny 17,5 miliara isam-bolana tamin'ny 2015, fitomboana 4,8% isan-taona. Noho ny fampielezan-kevitra hanavao ny indostria sy ny fitaovana, antenaina hiakatra 18,4 miliara miliara ny vokatra amin'ny 2016 ary hanakaiky ny 23 miliara isam-bolana amin'ny taona 2020. Sina, orinasa lehibe indrindra manerantany ...